China Palletizing စက်ရုပ် HY1165A-290 ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Yunhua
HY1165A-290 သည်အဓိကအားဖြင့် palletizing တွင်အသုံးပြုသော ၆ လုံး ၀ စက်ရုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောအစီအစဉ်အောက်ရှိအရာဝတ္ထုများကိုကွန်တိန်နာများထဲသို့အလိုအလျောက်သိုလှောင်နိုင်ပြီး၊ အလွှာပေါင်းများစွာထပ်မံသိုလှောင်နိုင်ပြီးသိုလှောင်ရန်သိုလှောင်ရုံသိုလှောင်ရုံများသို့ဝန်တင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလူ၏လှည့်စားမှုကိုကူညီခြင်းသို့မဟုတ်အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူများသည်ကုန်ပစ္စည်းများကို palletize လုပ်ရန်ရိုးရှင်းသည့်စနစ်ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်ဂိုဒေါင်နှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုချွေတာနိုင်ရုံသာမကကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုသပ်ရပ်စွာသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်စေသည်။
ဝင်ရိုးတန်း MAWL အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြန်လုပ်နိုင်မှု ပါဝါ
operating ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ်အလေးချိန် အရစ်ကျ အိုင်ပီအဆင့်
6 ၁၆၅ ကီလိုဂရမ် ± 2mm 10KVA 0-45 ℃ 1800KG မြေပြင် IP54 / IP65 (ခါး)
ရွေ့လျားမှုအကွာအဝေး J1 J2 J3 J4 J5 J6
အများဆုံးအမြန်နှုန်း 70 ° / s 82 ° / s 82 ° / s 134 ° / s 77 ° / s 120 ° / s
Q1. စက်ရုပ် palletizer ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်နိုင်သနည်း။
AA စက်ရုပ် palletizer သည်ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးတည်းအတွက်ခဲယဉ်းသည့် palletizing system ထက်စျေးကြီးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်များစွာသော Infeeds ပါသောသီးသန့် palletizer ထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ စက်ရုပ်ကိုယ်ထည်ကိုဒေါ်လာ ၁၀K မှစက်ရုပ်ကိုယ်ထည်အတွက်ဒေါ်လာ ၃၀ မှဒေါ်လာ ၃၀ အထိရနိုင်သည်။
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းအတွက်မည်သည့် End-of-Tool-Tooling (EOAT) ကိုအသုံးပြုသနည်း။
A. သူတို့သီးသန့်အသုံးပြုမှုရှိသည့် EOAT ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Vacuum cups သို့မဟုတ် pads များကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပိတ်ထားသောထိပ်ဖျားများနှင့်လက်ဆွဲပုံးများတွင်အသုံးပြုသည်။ scoop tool တစ်ခုသို့မဟုတ် combo scoop & clamp tool ကိုယေဘုယျအားဖြင့် open top case သို့မဟုတ် trays များတွင်အသုံးပြုသည်။ 20-100 # အကွာအဝေးရှိအိတ်ကြီးများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ချောင်းများနှင့် tamp ပါသောလက်ကိုင်အိတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထူးဆန်းပုံသဏ္partsာန်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်ညှပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြင့်ကောက်ယူသည်။
A. သင့်စက်ကို palletizing စက်ရုပ်ဖြင့်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ထားပါ။ သင်၏တင်ဆောင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
A.we သည်ရှည်လျားသောလမ်းရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုမြင်ရမည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖောက်သည်ကတော့အသေးစားနဲ့အလတ်စားစက်ရုံဖြစ်ပြီး ABB, Funac, Kuka, Yaskawa, OTC လိုနာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေတွေမတတ်နိုင်ပါဘူး။
A. ဘယ်နိုင်ငံလဲ။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့နက်ရှိုင်းစွာအခမဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့တိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သည်တွေကိုအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
ရှေ့သို့ စက်ရုပ် HY1003A-098 ပုံနှိပ်ခြင်း
နောက်တစ်ခု: palletizing စက်ရုပ် HY1010A-143